Laser Ukumaka Software EZCAD, Isilawuli, Galvo Scanner Head - JCZ
I-ezcad2 ne-ezcad3 yisoftware ehlukahlukene yezinhlobo ezahlukahlukene zokulungiswa kwelaser nge-laser galvo scanner. iyahambisana nezinhlobo eziningi ze-laser ne-galvo emakethe futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
I-LMC ne-DLC2 laser control isebenza nesoftware ye-ezcad, ekwazi ukulawula izinhlobo eziningi ze-laser (FIBER, CO2, UV, Green ...) kanye nesithwebuli se-galvo (XY2-100, sl2-100 ...) emakethe.
Ama-axis ama-2 axis kanye ne-3 axis laser galvo scanner ayatholakala, kusuka ekunembeni kwe-stanard kuya ekunembeni kwe-ultra ngejubane elijwayelekile kanye ne-utrl-high speed.customization iyatholakala.
Sinikezela ngobubanzi obugcwele bokuklanywa kwe-laser optics nokukhiqizwa okufana ne-F-theta scan lens, ugongolo we-expander, kanye nelensi yokugxila ngezinhlobo ezahlukahlukene zokumboza nezinto ezibonakalayo.
Siletha umthombo we-laser onokwethenjelwa kakhulu, owenziwe e-china noma kwamanye amazwe kanye nezinye izingxenye njengephakheji ye-laser, ngentengo yokuncintisana kakhulu.
Sakha imishini yokucubungula i-laser ye-welding, ukusika, ukusika imishini, ukumboza ... yomibili imishini ejwayelekile futhi eyenziwe ngezifiso.
Ikhwalithi, Ukusebenza, Ukusebenza Okubiza Kakhulu Nesevisi.
Okuhlangenwe nakho kweminyaka eyi-16 emkhakheni we-laser kwenza i-JCZ ingabi ibhizinisi elihola phambili emhlabeni kuphela elisathuthuka futhi likhiqize ukulawulwa kwemishayo ye-laser nemikhiqizo ehlobene nokulethwa kepha futhi nomhlinzeki onokwethenjelwa wezingxenye ezahlukahlukene ezihlobene ne-laser nemishini eyenziwe futhi eyenziwe yodwa, ngaphansi, ukubamba, izinkampani ezitshaliwe nabalingani becebo.
Isithwebuli se-Laser Galvo
Isoftware ye-EZCAD2 yasungulwa ngo-2004, unyaka lapho i-JCZ yasungulwa khona. Ngemuva kokuthuthuka konyaka we-16, manje isendaweni ehamba phambili embonini yokumaka i-laser, enemisebenzi enamandla nokuqina okuphezulu. Isebenza ne-LMC series laser controller. E-China, ngaphezu kwe-90% yomshini wokumaka i-laser uku-EZCAD2, nakwamanye amazwe, isabelo sayo semakethe sikhula ngokushesha okukhulu. Chofoza ukuze uhlole imininingwane eminingi nge-EZCAD2.
Isoftware ye-EZCAD3 yasungulwa ngo-2015, yazuza imisebenzi eminingi nezici ze-Ezcad2. Kungenxa yesoftware esezingeni eliphakeme (njenge-64 software kernel ne-3D function) kanye ne-laser control (ehambisana nezinhlobo ezahlukahlukene zamasu we-laser ne-galvo scanner). Onjiniyela be-JCZ bagxile ku-EZCAD3 manje, maduze nje, izongena esikhundleni se-EZCAD2 ukuze ibe enye yesoftware ethandwa kakhulu ekusetshenzisweni kwe-laser galvo efana ne-2D ne-3D laser marking, i-laser welding, i-laser cutting, i-laser drilling ...
Isixazululo sesoftware yokuphrinta ye-JCZ 3D siyatholakala ku-SLA, SLS, SLM, nezinye izinhlobo ze-3D laser prototyping ye-SLA, senze isoftware eyenziwe ngezifiso ebizwa nge-JCZ-3DP-SLA. Umtapo wolwazi we-software kanye nekhodi yomthombo ye-JCZ-3DP-SLA nayo iyatholakala. Kwi-SLS ne-SLM, ilabhulali yesoftware yokuphrinta ye-3D iyatholakala ukuze abahlanganisi bohlelo benze isoftware yabo yokuphrinta ye-3D.
I-EZCAD software development kit / API yazo zombili i-EZCAD2 ne-EZCAD3 isiyatholakala manje, Imisebenzi eminingi ye-EZCAD2 ne-EZCAD3 ivulelwa abahlanganisi bohlelo ukuze bahlele isoftware eyingqayizivele yohlelo oluthile, enelayisensi yokuphila.
Laser Resistor Ukusika Machine atTS4410F-C50
Laser Resistor Ukusika System
I-Beijing JCZ Technology Co., Ltd, eyaziwa njenge-JCZ yasungulwa ngonyaka we-2004. Kuyibhizinisi lobuchwepheshe elaziwayo, elizinikezele ekulethweni kogongolo lwe-laser nasekulawuleni okuhlobene nocwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, nokuhlanganiswa. Ngaphandle kwemikhiqizo yayo eyinhloko ye-EZCAD laser control system, esendaweni ehamba phambili ezimakethe eChina nakwamanye amazwe, i-JCZ ikhiqiza futhi isabalalisa imikhiqizo ehlukahlukene ehlobene nelaser kanye nesisombululo sabahlanganisi bohlelo lwe-laser lomhlaba wonke njenge-software ye-laser, isilawuli se-laser, i-laser galvo isithwebuli, umthombo we-laser, i-laser optics…
Kuze kube unyaka ka-2019, sinamalungu ayi-178, futhi ngaphezu kuka-80% wabo ngochwepheshe abanolwazi abasebenza ku-R & D kanye nomnyango wokusekelwa kwezobuchwepheshe, behlinzeka ngemikhiqizo ethembekile kanye nokwesekwa kwezobuchwepheshe okusabelayo.
Ikhwalithi ephezulu One-Stop Izikhungo Inani Lokuncintisana
Yonke imikhiqizo eyenziwe i-JCZ noma abalingani bayo iqinisekiswa ngonjiniyela be-JCZ R & D futhi ihlolwe ngokuqinile ngabahloli ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo efike kumasayithi wamakhasimende ayinasici.
INKONZO EMI NGAMUNYE
Abasebenzi abangaphezu kwesigamu ku-JCZ basebenza njenge-R & D kanye nonjiniyela bokusekelwa kwezobuchwepheshe abahlinzeka ngokusekelwa okugcwele kumakhasimende emhlabeni jikelele. Kusukela ngo-8: 00 ekuseni kuya ku-11: 00 PM, kusukela ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo, unjiniyela wakho wokusekela okhethekile uyatholakala.
IPHEPHA LOKUQHUBEKANA NAMANANI
I-JCZ ingumninimasheya noma umlingani osemaqhinga nabahlinzeki bayo abakhulu. Yingakho sinentengo ekhethekile futhi izindleko nazo zingancishiswa uma amakhasimende ethenga njengephakethe.